မိတ်ဆွေပေးသွားသောဦးထုပ်ခြောက်လုံး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Ideas & Plans » မိတ်ဆွေပေးသွားသောဦးထုပ်ခြောက်လုံး
Posted by နည်ရဲဇော် on Jul 11, 2011 in Ideas & Plans |4comments
“မိတ်ဆွေကို ကျုပ်တစ်ခုအတပ်ပြောလိုက်မယ်။ ခင်ဗျားမှာ ပြဿနာတစ်ခုရှိနေရမယ်”
ကျွန်တော်လည်း စိတ်အငေါ်တူးတူးဖြင့် “ဟုတ်ပါ့ကိုယ့်လူရာ။ ပြဿနာဆိုတာ တစ်ခုမပြောနဲ့ ပြဿနာပေါင်း
သောင်းခြောက်ထောင်နဲ့ဗျ။ ကျုပ်မှာနေ့တိုင်း ခေါင်းကိုပူနေတာပဲ” ဟုပြောမိ၏။
ထိုမိတ်ဆွေက အောင်နိုင်သူလေသံဖြင့် “ဒါဆိုရင်တော့ ခင်ဗျား
ကျွန်တော်လည်း “တော်စမ်းပါကိုယ့်လူရာ။ နဂိုကမှ ခေါင်းတွေပူနေရတဲ့အထဲ ဦးထုပ်ခြောက်လုံးမပြောနဲ့ တစ်လုံးတောင် မဆောင်းနိုင်ပါ
မြင်တွေ့ရသဖြင့် စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဟန် ခေါင်းကိုခါယမ်းရင်း “နိုး နိုး။
လင်းရတော့မှာပေါ့။ ဟောဟိုက လက်ဖက်ရည်ဆိုင်သွားကြရအောင်။ ကျွန်တော်တိုက်ပါ့မယ်။ “
“ညီလေးရေ။ ချိုကျတစ်ခွက် ပေါ့စိမ့်တစ်ခွက်။ မုန့်တွေရှိတာချကွာ” ထို့နောက်
လက်ဖက်ရည်ချိုကျကို တစ်ငုံသောက်လိုက်၊ ဆေးပေါ့လိပ်တစ်ရှိုက်ဖွာလိုက်ပြီး သူက “ဒီလိုဗျ။
တစ်သိန်းချေးတယ်ဗျာ၊ ခင်ဗျားချေးသင့်. . .မ . .ချေး”
“ဟာဗျာ။ မချေးနိုင်ပါဘူး။ ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်တောင်မနည်းလောက်အောင်သုံးနေရတာ။
အိမ်က မိန်းမနဲ့တော့ ရန်တိုက်မပေးပါနဲ့။”
” ဥပမာလေဗျာ၊ ခင်ဗျားကလည်း ဥပမာလေးတောင်အပေးမခံဘူးလား “
” ကဲ ထားပါတော့။ ဆက်ပြောစမ်းပါဦး။ “
” အခုခင်ဗျားကပြောတယ်။ မချေးနိုင်ဘူးတဲ့။ ဒါဘယ်အမြင်ကပြောတာလဲ။ အပျက်သဘောက ခင်ဗျားစဉ်းစားလိုက်တာပဲ။
တစ်လပဲကြာမယ်။ အာမခံ အနေနဲ့ တစ်ခုခုပေးထားမယ် ဒီလိုဆိုရင်ကော “
“ဟာ ဒါဆိုရင်တော့ ချေးသင့်တာပေါ့“
“ကဲ ခင်ဗျားက အခုကျတော့ အပြုသဘောဘက်ကစဉ်းစားလိုက်တာ။ အကျိုးအမြတ်ဘက်က ကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်တာ။
ဒါပဲဗျ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သမရိုးကျ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်မှုက အရှုံးနဲ့အမြတ်၊ အကာင်းနဲ့အဆိုး၊ အပြုနဲ့ အပျက် အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆီလျော်မှု ဆိုတဲ့ရှုထောင့်နှစ်မျိုးကနေဆုံးဖြတ်ကြတာပဲ။“ ဟုပြောရင်း လက်ဖက်ရည်တစ်ကျိုက်မော့သောက်လိုက်ပြန်သည်။
ကျွန်တော်လည်း ရေနွေးကြမ်းတစ်အိုးထပ်မှာရင်း “ဟုတ်ပါပြီ။ ဦးထုပ်ခြောက်လုံးနဲ့ ပိုက်ဆံချေးတာနဲ့ ဘာဆိုင်လို့တုံးဗျ။“ဟုစိတ်မရှည်စွာမေးမိသည်။
သူက အကွက်ဆိုက်သွားပုံဖြင့် “ဒါပေါ့ဗျာ။ ပြဿနာတိုင်းကတော့ ပိုက်ဆံချေးတဲ့ ကိစ္စလို ဖြေရှင်းဖို့ ဘယ်လွယ်မလဲ။
အမြဲတမ်း ရှုထောင့်နှစ်ခုထဲကပဲ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်လို့မဖြစ်ဘူးဗျ။ ဒီအခါမျိုးမှာ ကျွန်တော်ပြောတဲ့ ဦးထုပ်ခြောက်လုံးစဉ်းစားနည်းကို သုံးသင့်တယ်။”
ကျွန်တော်လည်း လက်ပတ်နာရီကိုလှမ်းကြည့်လိုက်မိသည်။ ဘတ်စ်ကားကလည်း ဒီနေ့ကျမှ ကြာနေသည်။ စားပွဲပေါ်က လက်ဖက်ရည်လည်းတစ်ဝက်လောက်ကျန်နေသေးသည်။ မိတ်ဆွေကလည်း သူ့စကားပြီးမှ ထမည့်ပုံပေါ်သဖြင့် ” ကဲ ဆက်ရှင်းစမ်းပါဦးဗျာ” ဟုလမ်းကြောင်းပေးလိုက်ရသည်။
သူက ” ဒီနည်းက ဒေါက်တာ ဒီဘိုးနိုး ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတီထွင်ခဲ့တဲ့ ပြဿနာဖြေရှင်းနည်း တစ်ရပ်ပေါ့ဗျာ။ ဒီဘိုးနိုးက ဦးထုပ်ခြောက်လုံးကို
ဖြူ၊ နီ၊ နက်၊ ၀ါ၊ စိမ်း၊ ပြာဆိုပြီး အရောင်ခြောက်မျိုးခွဲထားတယ်။ အရောင်တစ်ခုစီက စဉ်းစားပုံနည်းလမ်းတစ်ခုစီပေါ့ဗျာ။ “
” အဖြူရောင်ဦးထုပ်စဉ်းစားနည်းက အချက်အလက်တွေကိုဦးစားပေးချဉ်းကပ်တယ်။ ကိုယ့်မှာ ရှိထား သိထားတဲ့ ကိန်းဂဏန်းတွေ၊
“အနီရောင်ဦးထုပ်ကျတော့ ပြဿနာကို စိတ်ခံစားမှုကိုနဲ့ကြည့်တယ်။ ကိုယ့်စိတ်ကူးစိတ်သန်း၊ ထိုးထွင်းနိုင်စွမ်း နဲ့ဆုံးဖြတ်တယ်။ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုထက် တခြားသူတွေဘယ်လို စိတ်ခံစားမှုနဲ့တုန့်ပြန်မလဲဆိုတာကိုလေ့လာတယ်။”
” ဦးထုပ်အနက်ဆောင်းပြီဆိုရင်တော့ ခင်ဗျားရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မကောင်းတဲ့ဘက်ကအမျိုးမျိုး လှည့်တွေးတော့တာပဲ။ သတိကြီးစွာ ထားပြီး ခံစစ်ဘက်ကအမြဲတမ်းနေတယ်။ ဘာကြောင့် အလုပ်မဖြစ်မှာလဲ ဆိုတာကိုရအောင်တွေးတယ်။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် အားနည်းချက်တွေလိုက်ထောက်တယ်ပေါ့ဗျာ။ ဒီတော့ အလုပ်စမလုပ်ခင် အားနည်းချက်တွေကိုပြင်၊ လိုအပ်တဲ့ အရေးပေါ် စီမံကိန်းတွေကြံစည်ရတာပေါ့။ ကျွန်တော်တို့အများစုက အလုပ်တစ်ခု လုပ်ရင် တွက်ရေးကစက်သူဌေးဆိုသလို အကောင်းချည်းမြော်လင့် တတ်ကျတာမဟုတ်လား။ ဒီနည်းက ကိုယ့်ကို လာမယ့်အခက်အခဲတွေ ရင်ဆိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်ပေးရာရောက်တယ်လေ။”
မီးသေနေသောဆေးပေါ့လိပ်ကို မီးညှိရင်း ” ဒါနဲ့ စကားမစပ် ခင်ဗျားမိန်းမ အခုအရင်အကုမ္ပဏီမှာလုပ်တုန်းပဲလား။” ဟုကျွန်တော့်ကိုမေးလိုက်သည်။
” မလုပ်တော့ဘူးဗျ။ သူများလက်အောက်မှာလုပ်ရတာ မကြီးပွားနိုင်ဘူးတဲ့။ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုပြီး
ရပ်ကွက်ထဲမှာ ဆိုင်ခန်းတစ်ခန်းရှာပြီး အထည်ဆိုင်လေးဖွင့်ဖို့ ပြင်နေတယ်။ သူ့ကြည့်ရတာတော့ တက်ကြွနေတာပဲ။”
“အေးဗျာ။ သူစိတ်ချမ်းသာနေရင်ကောင်းတာပေါ့။ ဒီဘိုးနိုးကတော့ ဒီလိုဟာမျိုးကို အ၀ါရောင်ဦးထုပ်ဆောင်းတယ်လို့ ဆိုတယ်။
“အစိမ်းရောင်ဦးထုပ်ကကောဘယ်လိုလဲဗျ ဆက်စမ်းပါဦး။” ဟုမေးလိုက်သည်။
“အင်း. . . အစိမ်းရောင်ဦးထုပ်က တီထွင်ဖန်တီးတဲ့အတွေးနဲ့ သုံးသပ်ရတာ။ ပြဿနာကို အရင်တုန်းက မသုံးဖူးတဲ့နည်းတွေ၊ တခြားဖြစ်နိုင်ခြေတွေကို လွပ်လွပ်လပ်လပ် စိတ်ကူးတဲ့နည်းပါပဲ။ သူ့မှာက ဝေဖန်သုံးသပ်မှု နည်းနည်းပဲပါတယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို တုံ့ပြန်တဲ့အခါမှာ စိတ်ကူးသစ်တွေများများရအောင်လုပ်တာပေါ့။
“နောက်ဆုံးဦးထုပ်ဖြစ်တဲ့ အပြာရောင်ဦးထုပ်ကတော့ အကြီးအကဲလုပ်တဲ့သူတွေ၊ ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ ဥက္ကဌလုပ်ရတဲ့သူတွေ အတွက်ပဲ။ သူတို့က အခုပြောသွားတဲ့ စဉ်းစားနည်းတွေကို ခြုံငုံသုံးသပ်ရတာ။ ပြီးတော့မှာ ဘာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို ရှေ့ဆက်သွားရတာပေါ့။
” ဒီတော့ အပေါ်ကပေးခဲ့တဲ့ ပိုက်ဆံချေးတဲ့ဥပမာကို ဦးထုပ်ခြောက်လုံးနည်းသုံးပြီးစဉ်းစားကြည့်ရအောင်။
အ၀ါရောင်နည်းနဲ့ဆိုရင်တော့ ဗျာ . . .” သူ့စကားမဆုံးသေးခင်မှာ ခါးတွင်ချိတ်ထားသော သူ့ဂျီအက်စ်အမ်ဖုန်းမှ “ကိုကို ဖုန်းလာနေတယ်” ဆိုသည့်အသံ အဆက်မပြတ်ထွက်ပေါ်လာလေသည်။ သူလည်း ဖုန်းနှင့်စကားပြောရင်းမှ “အိမ်ကမိန်းမ ဈေးဝယ်ခိုင်းထားတာ မပြီးသေးဘူးဗျို့။ အခုလှမ်းမေးနေပြီ။ စကားပြောလို့ကတော့ကောင်းတယ်။ နောက်မှ ဆက်ဆွေးနွေးကြတာပေါ့ဗျာ။ ဟောဒီမှာ ကျွန်တော့လိပ်စာကတ်ဟု လှမ်းပေးကာ ပိုက်ဆံရှင်းရန် ကောင်တာသို့ ခပ်သုတ်သုတ်ထွက်သွားလေတော့သည်။
ဦးထုပ်ခြောက်လုံးနဲ့ သင်ထားတာတွေအပေါ် အခြေခံပြီး ဖြည့်စွက်လိုက်မယ်။
အ၀ါရောင်နည်းနဲ့ဆိုရင် သူပြန်ဆပ်မှာပါ မဆပ်ရင်လည်း အလှူပေါ့လို့ တွေးပြီး ငွေချေး ပေးလိုက်မယ်။
အစိမ်းရောင်နည်းနဲ့ဆိုရင် သူ့ရဲ့ လက်ရှိ လုပ်ငန်းရဲ့ အခြေအနေ၊ အကျိုးအမြတ်တွေကို ကြည့်မယ်။
အပြာရောင်နည်းနဲ့ဆိုရင် အရင်က ငွေချေးတုန်းက သူရဲ့ တုန့်ပြန်မှု၊ အခုလက်ရှိ လုပ်ငန်းအခြေအနေ၊ ဆုံးရှုံးရင် အစားပြန်ရနိုင်ဖို့ အပေါင်ပစ္စည်း တွေကို ကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်မယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ငွေချေးမယ်ဆိုရင်တော့ အပေါင်နဲ့ စာချုပ်နဲ့ခိုင်ခိုင်မာမာ လုပ်သင့်တယ်။ ဒီကြားထဲကပဲ ဆုံးရှုံးတာတွေ ရှိသေးတယ်။
ငွေမရှိ ကတိမတည် ဆိုသလိုဖြစ်သွားဦးမယ်
မမပြောသလို အ၀ါရောင်လေးနဲ့ပဲ စိတ်ဖြေရမှာပေါ့နော်…..
(အ၀ါက ဓမ္မနဲ့ နွှယ်တဲ့အရောင်မလား)
ငွေမရှိ ကတိမတည်က တော်သေးတယ်။ တချို့ကချေးကတည်းက ပြန်ပေးဖို့ ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘူး။
တချို့ ကတော့ မရှိတာတောင် တဖြေးဖြေး ဖဲ့ဆပ်တယ်။